Cellulite အမျိုးသားများ ရှောင်နည်း စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 07/11/2021 13:13 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, fit, အစာအာဟာရ, ကျန်းမာခြင်း
ယောက်ျားရယ် cellulite ခံစားနေရသည်။. ကြောက်စရာကောင်းသော ဒေသထွက်အဆီများကို ခုခံနိုင်သည့် ခန္ဓာကိုယ်မရှိသော်လည်း ပိန်လှီသော အမျိုးသားများတွင်ပင် အံ့သြသွားရသည်။ အကယ်၍ သင်သည် cellulite ဖန်တီးရန် သဘောထားရှိသူထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ ဤနေရာတွင် သင့်အား အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်များ ပေးပါမည်။ ဒီအဆီရှောင်ရန်.
ယေဘုယျအားဖြင့် cellulite ဝေဒနာခံစားရတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်။ 10% သာ အမျိုးသမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းကို ခံစားနေရသည်။ ရယ် ခြေထောက်များ၊ ဝမ်းဗိုက်ဧရိယာ၊ တင်ပါးနှင့် လက်များပေါ်တွင် ပေါ်လာသည်။ ဟော်မုန်းပြဿနာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
1 အမျိုးသားများတွင် cellulite ကဘယ်လိုလဲ။
2 Cellulite ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
3 မည်သည့်အစားအစာကို အကြံပြုလိုသနည်း။
4 အားကစားနှင့် လှုပ်ရှားမှုသည် အကောင်းဆုံး မဟာမိတ်ဖြစ်သည်။
5 cellulite ကိုရှောင်ရှားရန်အခြားကုသမှုအမျိုးအစားများ
အမျိုးသားများတွင် cellulite ကဘယ်လိုလဲ။
Cellulite တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အဆီစုပုံခြင်း။ ၎င်းသည် အရေပြား၏ နက်ရှိုင်းသောအလွှာတွင် အကျုံးဝင်သည်။ အဆီအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုနည်းသည်။ အဆီအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲကြသည်။ အမျိုးသားများသည် များသောအားဖြင့် ခါးနှင့် ဝမ်းဗိုက်ကဲ့သို့သော နေရာများတွင် စုပုံလေ့ရှိသည်။
အမျိုးသားတွေမှာ cellulite မရှိဘူးဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ မနေပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပြောတာမှန်တယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ရှားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးများတွင် အီစထရိုဂျင် အများအပြားရှိပြီး အမျိုးသားများတွင်လည်း လျော့နည်းသည်။ ဤအချက်က ၎င်းတို့ကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အချို့နေရာများတွင် အဆီမစုမိစေရန် ကူညီပေးသည်။ ပေါင်နှင့် တင်ပါး. ထို့အပြင် အမျိုးသားများတွင် တက်စတိုစတီရုန်း မြင့်မားခြင်းသည် စားသုံးထားသော အဆီများကို အရည်ပျော်ရန် များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။
အရေပြားဖွဲ့စည်းမှုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံ ယောက်ျားချင်း မတူဘူး။ အရေပြား၏နက်ရှိုင်းသောအလွှာဖွဲ့စည်းသည်။ ဒေါင်လိုက်ကင်မရာများဖြင့် ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အဆီစုပုံခြင်းကို ပိုကောင်းစေသည်။ အမျိုးသားများတွင် ဤအခန်းငယ်များကို ယူနစ်ငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ထောင့်ဖြတ်ထားသည်။ အဆီတွေ အများကြီး ဖြန့်ဝေတယ်။
အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေရော cellulite ကို ကာကွယ်ဖို့ သူတို့ရဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆုံးတွင်၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်သည် အလွန်ကွဲပြားခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် များစွာရှိသည်ကို ထည့်ရန်လိုသည်။ အဆီပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ။
ပထမအချက်က ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားဖို့ပါ။ ကျန်းမာသောအစားအစာ။ အရက်နှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် အလေ့အကျင့်အဖြစ် ပထမဆုံး စွန့်ပစ်ရမည့် အရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပြည့်ဝဆီများနှင့် သကြားဓာတ်များ အစားအစာမှဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
Stress က တခြားအချက်ပါ။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ functional system ကို ပြောင်းလဲစေတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများသည် များစွာသော ကိစ္စများတွင် ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆီများကို သိုလှောင်စေပြီး ၎င်းကို ဒေသအလိုက် ဖြစ်စေသည်။
ဒါ​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော်​တို့ သုံးသပ်​ပြီးပါပြီ။ ပိုလျှံအဆီနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ် cellulite ကိုနှစ်သက်သည်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကူညီသောအစားအစာများရှိသည်။ အသီးအနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် အစိမ်းရောင်များသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဆီမထည့်ရပါ။ ဒါပေမယ့် ပန်းသီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ရွှေဖရုံသီး၊ နာနတ်သီး ဒါမှမဟုတ် ကညွှတ်လိုမျိုး အချို့မှာ ဆိုဒီယမ် နည်းပါးပြီး ပိုတက်စီယမ် ကြွယ်ဝတာကြောင့် ၎င်းတို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အရည်များကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီသည်။
အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများ ၎င်းတို့သည် အူလမ်းကြောင်းကို နှစ်သက်ကြပြီး cellulite ကာကွယ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အစေ့အဆန်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် သစ်သီးဝလံများသည် ဤအစိတ်အပိုင်းတွင် ကြွယ်ဝပါသည်။ အားလုံး citrus ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝပြီး ဗီတာမင် E ကြွယ်ဝသော အစားအစာများသည် အဆီမပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
စောင့်ရှောက်ရမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်အရမ်းရတယ်။ဆိုလိုတာက တစ်နေ့ကို ရေနှစ်လီတာအထိ သောက်ပါ။ ဤအရည်များထဲတွင် လက်ဖက်စိမ်း၊ မြင်းမြီး သို့မဟုတ် လိမ္မာရည်ကဲ့သို့သော သဘာဝဖျော်ရည်များ သို့မဟုတ် ဖျော်ရည်များပါ၀င်နိုင်သည်။
အားကစားနှင့် လှုပ်ရှားမှုသည် အကောင်းဆုံး မဟာမိတ်ဖြစ်သည်။
activate လုပ်ရမယ်။ အထိုင်များသောလူနေမှုပုံစံသည် cellulite ၏အသွင်အပြင်အတွက်အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားကစားက ကူညီပေးတဲ့အတွက် ကောင်းပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှု activate ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်သော အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများမှာ အပြေး၊ အေရိုးဗစ်၊ ရေကူးခြင်းနှင့် စက်ဘီးစီးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်း အလယ်အလတ် အေရိုးဗစ်ပြင်းအား ရောစပ်ပြီး ကြာရှည်ခံအောင် စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ရောနှောထားသည့် အစည်းအဝေးများ ဖြစ်ရမည်။ မိနစ် 20 လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းထန်မှုနှင့် ပျော့ပျောင်းသော ပြင်းထန်မှုတို့ကို ပြန်လည်ရရှိရန်။ Sprint၊ squats စီးရီး၊ lunges၊ multi-jumps၊ လှေလှော်ခြင်းနှင့် စက်ဘီးများ။
သုံးတဲ့ အမျိုးသားတွေရှိတယ်။ ကြွက်သား electrostimulation နေဖို့။ ၎င်းတွင် ကြွက်သားကျုံ့သွားစေရန် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုထားသည်။ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ဦးနှောက်က ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ဆီကို တွန်းပို့လိုက်တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အတူတူပါပဲ။
အနှိပ်သည် စံပြဖြစ်သည်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေရန်နှင့် ဒေသအလိုက်ပြုလုပ်ထားသော အဆီအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်။ ဤအနှိပ်အမျိုးအစားတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သော ဆဲလ်လူလိုက်ဆန့်ကျင်သည့် ခရင်မ်များရှိသည်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ရှိတယ်။ lymphatic နှိပ်နယ်ခြင်း၊ pressotherapy နှင့် mesotherapy. ၎င်းတို့အားလုံးသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အရည်များကို စွန့်ထုတ်ရန် ကူညီပေးသည်။
ဒါတွေကတော့ cellulite ကို ကာကွယ်ချင်ရင် လိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်းတွေပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်သည်ထက် ကယ်လိုရီပိုမယူပါနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် အဆီကင်းစင်သော ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး အဆီနည်းတဲ့ အစားအသောက်တွေက လည်း အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » အစာအာဟာရ » Cellulite အမျိုးသားတွေကို ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ